Ny sidina Geneva mankany New York amin'ny SWISS sy United Airlines izao
Home » Lahatsoratra farany farany » Airlines » Ny sidina Geneva mankany New York amin'ny SWISS sy United Airlines izao
Airlines • Airport • Aviation • Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovaom-panjakana • Vaovao momba ny fahasalamana • Hospitality Industry • Vaovao • People • fanorenana • tompon'andraikitra • Vaovao Mafana Soisa • Tourism • Fitaterana • Travel Wire News • Etazonia Vaovao Vaovao
Ny sidina Geneva mankany New York amin'ny SWISS sy United Airlines izao.
Misy ny fangatahana maharitra ny fitsangatsanganana any Suisse avy any Etazonia, ary vaovao tsara ho an'ny mpitsangatsangana sy ny mpanao raharaham-barotra izao.
SWISS dia hiasa hatramin'ny sidina efatra isan-kerinandro mankany New York's JFK manomboka amin'ny 14 Desambra 2021.
United Airlines dia hanohy ny sidina Newark-Geneva amin'ny 1 Novambra 2021, miaraka amin'ny sidina efatra isan-kerinandro.
United Airlines sy SWISS dia mpiara-miasa codeshare ary mpikambana ao amin'ny Star Alliance.
SWISS International Air Lines, Mpitondram-pirenena nasionaly Suisse, dia nanambara fa hanohy ny sidina anelanelan'ny seranam-piaramanidina Geneva (GVA) sy ny seranam-piaramanidina John F. Kennedy International (JFK) any New York amin'ny andro voafantina amin'ny herinandro manomboka amin'ny Desambra 2021. SWISS dia hiasa hatramin'ny sidina efatra a herinandro mankany amin'ny JFK manomboka ny 14 Desambra 2021.
United Airlines dia nanambara ihany koa fa ny serivisy misy eo amin'ny seranam-piaramanidina Geneva sy ny Seranam-piaramanidina Iraisam-pirenen'i Newark Liberty (EWR) dia hitohy amin'ny 1 Novambra 2021, miaraka amin'ny sidina efatra isan-kerinandro.
Ireo seranam-piaramanidina roa dia mpiara-miombon'antoka codeshare ary mpikambana ao amin'ny Star Alliance.
Misy ny fangatahana maharitra amin'ny fitsangatsanganana any Soisa ary ity dia vaovao miarahaba ho an'ireo mpandeha fialan-tsasatra na mpandraharaha. Tena marina izany ho an'ireo izay mitady sidina mivantana mankany Genève sy mankany Vaud, ilay kanto miteny frantsay eo amoron'ny Farihin'i Genève. Ny fanapahan-kevitry ny SWISS sy United dia zava-dehibe amin'ny fandraharahana sy ny fizahan-tany ao an-drenivohitra Lausanne, fonenan'ny tranom-bakoka Olaimpika, ary koa amin'ireo tanàna amoron-drano toa an'i Montreux sy Vevey. Ny fotoanan'ny fanambarana dia mety ihany koa amin'ny fanombohan'ny vanim-potoanan'ny ski 2021-22 amin'ny trano fandraisam-bahiny, anisan'izany i Villars, Les Diablerets ary Leysin, ary koa ao amin'ny Glacier 3000.
Ny làlana manelanelana an'i Genève sy New York dia iray amin'ireo fifandraisana manan-tantara indrindra amin'ny seranam-piara-manidina. Natomboka taorian'ny ady tamin'ny 1947 izy io mba hampifandray ireo ivon-toerana roa an'ny Firenena Mikambana ary nanjary tetezana diplomatika. Androany, i Geneva dia fonenan'ny fikambanana iraisam-pirenena maherin'ny 30 sy ONG efa ho 400. Talohan'ny areti-mandringana COVID-19 dia nampiantrano fivoriambe sy fivoriana iraisam-pirenena mihoatra ny 3,000 isan-taona ny faritra. Betsaka ny orinasa amerikanina maro no manana ny foiben'ny faritra any Soisa miteny frantsay ary ny seranam-piaramanidina dia fifandraisana lehibe eo anelanelan'ny Kanto Vaud sy Etazonia ho an'ny fitsangatsanganana ara-barotra sy fialamboly.